Arzantina: Inona no mahasorena ny Arzantina? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Jolay 2011 7:58 GMT
Vakio amin'ny teny English, 한국어, македонски, Español
Lavitry ny fahadisoam-panantenana tamin'ny faharesena tamin'ny lalao Copa America 2011, izay ahitan'i Arzantina na i Uruguay na i Paraguay no haharesy [tamin'ny nanoratana ity lahatsoratra ity dia resin'i Uruguay tamin'isa 3-0 i Paraguay tamin'ny lalao famaranana ny Copa América tamin'ny Alahady 24 Jolay], raha tsy lazaina intsony hoe nahasorena ny Arzantina ny lalao baolina kitra [es] tao ho ao. Tamin'ny 22 Jolay, nanjary lohahevitra vaovao nironana ary narahina fihetsiketsehana sy fahasorenana momba ny politika [es], fifamoivoizana [es], ny fiarahamonina[es] eny fa na dia ny fianakaviana [es] sy ny tambanjotra sosialy [es] ny tenifototra hoe #irritante [es] (#mahasosotra).
Mandritra ny taona 2011, anaty zotra maankany amin'ny fifidianana[es] i Arzantina, izay hanovàna manam-pahefana maro toy ny filoha, ny governora, ny senatera, ny mpikamban'ny kongresy sy ny mpitondra miaramila. Maro karazana ny fihetseham-pon'ny olona. I Gonzalo Ayala (@gonzalomayala) dia sosotra amin'ny Mpitondra ny Governemanta'ny Tananan'i Boenozera [es] sy ny kandida ho an'ny fifidianana (Efa Filohan'ny klioban'ny lalao baolina kitra malaza Club Boca Juniors ihany koa izy), Mauricio Macri:
Sary nalain'i Geronimo de Francenso, Flickr (CC BY-SA 2.0)
Tsy tia lainga i JP Saenz Valiente (@Jpsaenzvaliente) ary manolotra kandida ho vahaolana:
#mahasosotra ny miaritra ny laingan'ny hafa. Hoan'ny governemantan'i k [Kirchner], ny olana rehetra dia toa fahatsapàna daholo. Afaka miova isika ary i @eduardoduhalde no vahaolana
Ny tranga tena resahina betsaka any Arzantina dia i Ernestina Herrera de Noble's. Tranga momba ny fananganana mpirahavavy roa, sy ny mety hisiana na tsia ny fifandraisana amin'ny zanak'ireo olona nanjavona nandritra ny fitondrana jadona nataon'ny miaramila izany. Ny fikarohana, natao nandritra ny 5 taona mahery, no nanao fandalinana jenetika niaraka amin'ny Genetic Data Bank ary mitsikera ny valiny ny gazety Los Andes [es]:
Omaly, nanamafy ny fitsarana fa tsy mifanaraka amin'ny an'ireo fianakaviana roa izay nanao fitarainana ho havan'ireto mpiray tampo ny fandalinana jenetikan'i Marcela sy Felipe Noble Herrera, noho izany, nametraka mazava tsara izy fa tsy misy ifandraisany ara-biolojika izy ireo.
Ao amin'ny Twitter, mitaraina mikasika ny fironana ara-politikan'ny mpamily fiarany ny kaonty antsoina hoe Ernestina (@MmeErnestina) ary manamarina amin'ny Genetic Data Bank:
Ny zavatra tena #mahasosotra dia ny mpitondra ny fiarako izay milaza ny tenany ho Peronista teo afovoan'ny kianja Recoleta. Izay tena tsy misy idiran'ny Genetic Data Bank.
Toby Fiantsoana an-tariby
Fa ankoatry ny politika, ny tolakandron'ny 22 Jolay lasa teo dia nitaraina ny olona mikasika ireo toby fiantsoana an-tariby sy ny filaharana; sahala amin'i Héctor D´ipolito (@hdippiros), izay tsy tia mpivarotra finday:
#mahasosotra – #toby fiantsoana an-tariby sy #Fivarotana findray, ianao indray no antsoin'ny fitaovana mpamaly antso ary dia ampiandrasiny ianao mandra-pisian'ny olona handray.
Ary tsy tia ampiandrasina i Pity (@pitydg89):
#mahasosotra ny miandry any amin'ireo toby fiantsoana an-tariby
Ny ‘lasibika rongony’
Vao tsy ela, nomelohina noho ny fivarotana rongony ny lasibika Arzantina iray. Tamin'ny Zoma 22 Jolay, navotsotra izy ary nilaza toy izao ny gazety Infobae [es]:
Nanazava ny mpisolo vava an'i Daiana Antivero, lasibika 18 taona nampangaina ho nivarotra rongony, fa ny zava-nisy marina tena nanoheran'izy ireo ity zatovo vavy ity, izay nohafahana tamin'ny maraina, dia noho izy antso an-tariby nataony hamandrihan-toerana ho an'ireo ” mafy loha”
Ni-tweet momba izany ireo Arzantina, toa an'i Maxi Lacrimoso (@maxiLACRIMOSO), milaza hoe:
Ny RONGONY LASIBIKA midina ny tohatr'i Courtroom. Misy miteny aminy fa voaheloka izy ary tsy somonga izany. Tena hitan'ilay vehivavy ny kamera… #mahasosotra
Ary i Mariano Mogni (@marianomogni), sosotra noho izany antony izany ihany:
#Mahasosotra fa mbola antsoina hoe “lasibika rongony” ilay lasibika mahantra (?) vao navotsotra tsy ela akory izay. Ah, ary tena mahasosotra koa i Sofia Gala atao hoe TT .
Fa nanomboka tamin'ny Zoma hariva, saika mikasika ny fiainana andavanandro sy ny zavatra izay mety manjo amintsika rehetra ireo tweets, na tiana na tsy tiana: mpiara-monina, havam-bady [es], raharaha aterineto na ny fifohazana maraina fotsiny aza:
#mahasosotra fa fohazin'izy ireo amin'ny tabataba aho
rehefa tsy mahita aterineto aho, izany no #mahasosotra
#mahasorena ny mandeha tongotra MAIKA eny an-dalana, ary amin'io andro io indrindra ny olona no betsaka tsy hay hoe avy aiza ary maneritery ny lalanao tsy hahafahanao mandroso
#mahasorena, ara-bakiteny, ny taratasy fidiovana any amin'ny trano fandihizana!//any amin'ny trano fivoahan'ny lehilahy tsy misy hahaha
#mahasosotra ny mandeha metro any ambanivohitra, tahaka ny mofo anaty harona
Misy zavatra mahasorena anao ve? Raha misy, ampiasao ny tenifototra #irritante hamohanao ny ao am-ponao.